ပုရိသတွေ ရင်သပ်ရှုမောသွားရလောက်အောင် မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ အိချောပို – Zartiman
ပုရိသတွေ ရင်သပ်ရှုမောသွားရလောက်အောင် မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ အိချောပို
Zar Ti Man | March 17, 2021 | Celebrity | No Comments
ယနေ့မှာတော့ ပရိသတ်အချစ်တော်မလေး စူစူက သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်မှာ ရေကူးကန်ထက်က အလန်းစားဖက် ရှင် လေးနဲ့ အထာကျကျမိမိုက်နေတဲ့ ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်မိသူပရိသတ်တိုင်း ရင်သပ်ရှုမောသွားရလောက် အောင် မိမိုက်လွန်းတဲ့ အိချောပိုရဲ့ ပုံလေးတွေကို ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်…. ။
အမိုက်စားကောက်ကြောင်းအလှတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး အိချောပိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ အမြဲလိုလို ကလေးဆန်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအရာလေးတွေ ကြောင့်လည်း ပုရိသ ပရိသတ်တွေက တစ်ခဲနက်ဝန်း ရံအားပေးနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိချောပိုကို ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးနဲ့ စူစူလို့လည်း ခေါ်တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ် ။
စူစူရဲ့ သရုပ်ဆောင်ပညာတွေဟာလည်း တစ်ကားထက်တစ်ကား တိုးတက်ပီပြင်လာတာကြောင့်လည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ အဆက်မပြတ်ရိုက်ကူးနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု အားလပ်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာလည်း မကြာခဏဆိုသလို ပရိသတ်တွေအတွက် Tik Tok လေးတွေ ဆော့ကစားကာ တင်ပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
Photo credit – Yell Lin Naing
ယနမှေ့ာတော့ ပရိသတျအခဈြတျောမလေး စူစူက သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာထကျမှာ ရကေူးကနျထကျက အလနျးစားဖကျ ရှငျ လေးနဲ့ အထာကကြမြိမိုကျနတေဲ့ ပုံလေးတှကေို တငျပေးလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကွညျ့မိသူပရိသတျတိုငျး ရငျသပျရှုမောသှားရလောကျ အောငျ မိမိုကျလှနျးတဲ့ အိခြောပိုရဲ့ ပုံလေးတှကေို ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော…. ။
အမိုကျစားကောကျကွောငျးအလှတှကေို ပိုငျဆိုငျထားသူလေးကတော့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး အိခြောပိုပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမကတော့ အမွဲလိုလို ကလေးဆနျပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အမူအရာလေးတှေ ကွောငျ့လညျး ပုရိသ ပရိသတျတှကေ တဈခဲနကျဝနျး ရံအားပေးနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အိခြောပိုကို ပရိသတျတှကေ ခဈြစနိုးနဲ့ စူစူလို့လညျး ချေါတာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ ။
စူစူရဲ့ သရုပျဆောငျပညာတှဟောလညျး တဈကားထကျတဈကား တိုးတကျပီပွငျလာတာကွောငျ့လညျး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှေ အဆကျမပွတျရိုကျကူးနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ယခုလကျရှိ အနုပညာလှုပျရှားမှု အားလပျတဲ့အခြိနျလေးတှမှောလညျး မကွာခဏဆိုသလို ပရိသတျတှအေတှကျ Tik Tok လေးတှေ ဆော့ကစားကာ တငျပေးနတောလညျး ဖွဈပါတယျ ။
ခါးသေးသေးလေးပေါ်မှာ ခါးလှည့် ကွင်းလေးနဲ့ ဆက်ဆီဆန်ဆန် မရပ်မနား လှည့်ပြနေ တဲ့ ခေးဆက်သွင်(ဗီဒီ ယို ဖိုင်)
စွဲမက်ဖွယ် အမူအရာလေးတွေနဲ့ အသည်းတ ယားယားဖြစ်အောင် လုပ်ပြနေတဲ့ မေဂရေ့စ်ရဲ့ Video
ဆက်ဆီကျကျအလှတရားတွေကို ပုရိသကြီးအားချပြလိုက်တဲ့ စစ်ပိုးအိမ်ရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို